Nangona ukuba nomthombo ozinzileyo wokukhokelela sele kuyinto entle kulo naliphi na ishishini, ayizukuzisa kutya kwipleyiti. Uyakonwaba ngakumbi xa iintengiso zakho zibuyiswa zilingana nengxelo yakho encomekayo kaGoogle. Kule meko, ubuncinci inxenye yezi zikhokelo kufuneka ziguqulwe ziye kwintengiso nakubathengi. Kuthekani ukuba ufumana iitoni zokukhokela, kodwa akukho ntengiso? Yintoni ongayenziyo ngokuchanekileyo, kwaye yintoni onokuyenza ukuze intambo yakho yentengiso ibuyele kumkhondo wayo olungileyo?
Inqaku elihle Jamil, mema kakhulu ukuba ucinge ngayo.
Uninzi lwexesha, abathengi bajonga kuqala ukuphononongwa kwenkampani okanye ingxelo yomnye umthengi ngaphambi kokuba baqhubeke nokujonga okanye banomdla wokujonga kumaphepha ahlukeneyo kwiwebhusayithi yakho. Kubalulekile ukulawula nokuphucula ixesha lokuqukethwe, kunye nokubonakala kwaye ngakumbi incoko kunye nokunxibelelana kwakho nabaxhasi abachaphazelekayo. Imikhankaso kunye nezikhokelo azinakuthathwa njengezivelisayo ukuba uthatha amanyathelo, kodwa awunayo imbuyekezo efanelekileyo yokuthengisa, ke kubalulekile ukuba uyilawule kwaye ube nayo zombini.